Nidaam cusub oo ku shaqeeya irdaha: homeOS waxaa lagu soo bandhigi karaa WWDC | Waxaan ka socdaa mac
Nidaam cusub oo ku shaqeeya irdaha: homeOS waxaa lagu soo bandhigi karaa WWDC
Manuel Alonso | | Xanta
Digniinta xanta waxaa kiciyay warkan cusub ee ka soo muuqday Twitter iyada oo loo marayo horumariye Isbaanish ah. Sida muuqata, Apple waxay ku daabacday liis ay ku qoran tahay shaqo soo bandhig ikhtiyaar ah inay kula shaqeyso waxa noqon doona nooca cusub ee nidaamka hawlgalka: guriga OS. Nidaamka hawlgalka Apple waligiis ma maqlin taasna sidoo kale waxay daadinaysaa shan maalmood ka dib bilowga WWDC 2021.
Horumariyaha Isbaanishka - Javier Lacort, Waxay ku dhawaaqday sida isaga laftiisu u sheegayo caarada uu sameeyay jotaalee iyo taas oo lagu ogaan karo jiritaanka liiska Apple ee injineer sare oo ka tirsan IOS-ka Apple Music. Waxay si cad u sheegtay "homeOS" laba jeer, oo ay weheliyaan nidaamyada kale ee ka shaqeeya Apple, oo ay ku jiraan iOS, watchOS, iyo tvOS.
Waxaad la shaqeyn doontaa injineerada nidaamka ee shirkadda Apple. Barashada gudaha macruufka, watchOS, tvOS, iyo HomeOS,iyo ku hagaajinta lambarkaaga waxqabadka qaababka kaliya ee Apple u awoodo. Ku soo biir kooxdayada oo aad u sameysaa isbeddel dhab ah kuwa jecel muusikada adduunka.
Kooxda Apple Music Frameworks waxay iska leeyihiin tiknoolajiyadda awood u siineysa nidaamka isku-dhafan ee Apple Music waayo-aragnimada dhammaan barnaamijyada moobiillada: IOS, watchOS, iyo homeOS.
Waxaa xiiso leh, liiska shaqadu wuxuu xusay homeOS inuu yahay a "Madal moobiil ah". Waxay u muuqataa inay muujineyso inay la mid tahay macruufka iyo watchOS marka loo eego nidaamyada sida macOS iyo tvOS. Laakiin ma cadda sababta ay taasi sidaas ku noqon doonto. Waxay si fudud u noqon kartaa dib-u-habeyn ku saabsan barnaamijka casriga ah ee casriga ah ee Apple ee hadda jira, si la mid ah in iOS-ka iPad-ka loo beddelay iPadOS iyo OS X oo loo beddelay macOS, ama laga yaabo inuu yahay nidaam hawlgal oo cusub.
Waa macquul in homeOS ay noqon karto barnaamij loogu talagalay in lagu hormariyo istiraatiijiyad guri oo caqli badan, oo laga yaabo in la mideeyo HomePod iyo Apple TV. Apple waxaa lagu xantaa inay soo saarayso Apple TV iyo aaladda HomePod oo isku dhafan iyo HomePod oo leh bandhig. Waqtigaan la joogo, waxa dhabta ah ee loo yaqaan 'homeOS' ee keenaya ayaa ah mid mala awaal ah.
In kasta oo Apple hadda ka saartay “homeOS” liiska shaqada kuna bedeshay HomePod iyo tvOS. Kama saari karno in lagu soo bandhigi karo WWDC nidaamkan cusub ee hawlgalka. Kaliya sug ilaa usbuuca soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Nidaam cusub oo ku shaqeeya irdaha: homeOS waxaa lagu soo bandhigi karaa WWDC
Daraasad ayaa lagu eegayaa go'aamada ay bukaanada wadnuhu qaataan iyagoo isticmaalaya saacadda Apple Watch
Maalinta Amazon Prime Day ayaa la xaqiijiyay Juun 21 iyo 22